Banaanbax Balaadhan Oo Looga Soo Horjeeday Falkii Argagixisda ISIS Ay Kudileen Muwaainiinta Itoobiya Ee Libya Ayaa Maanta Kadhacday Xarunta DDSI ee Caasimada Jigjiga. - Cakaara News
Banaanbax Balaadhan Oo Looga Soo Horjeeday Falkii Argagixisda ISIS Ay Kudileen Muwaainiinta Itoobiya Ee Libya Ayaa Maanta Kadhacday Xarunta DDSI ee Caasimada Jigjiga.
Jigjiga(CN) Arbaco.April.22.2015, sida aad wararkii hore kala socoteen shabakada CakaaraNews waxaa uu madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar si wayn u canbaareeyay falkii foosha xumaa ee ay kooxda argagixisada ah ee ISIS kudileen muwaadiniinta Itoobiya ee kusugnaa wadanka Libya isagoo sidoo kalena canbaareeyay wixii iyadana kadhacay toddobaadkan wadanka Koonfur Afrika.
Hadaba iyadoo guud ahaanba ay baarlamanka dalku kudhawaaqeen in laga bilaabo maanta ilaa 3 cisho calanka dalka hoos loo dhigo iyadoo markaasina loo baroor diiqayo dilkii naxdinta lahaa ee toddobaadkan loo gaysatay muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee kusugnaa dalkaas Libaya.
Waxaana maanta banaan bax balaadhan isugu soo baxay magaalada Jigjiga kumanaanan kun oo kasoo horjeeday falalka argagixisada ah ee ay kooxda ISIS kudileen muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee aan waxba galabsan. Waxaa aroornimadii hore ee maanta lagu qabtay munaasibad wayn oo baroor diiq ah garoonka ciyaaraha ee magaalada Jigjiga halkaas oo ay kasoo qayb galeen madaxda ugu saraysa ee DDSI oo ugu horeeyaan madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq, cabinetka, wasiirada, haayadaha diimaha iyo awqaafta, culumo awdiinka, wax garadka, ardayda jaamacadaha, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee shacabwaynaha DDSI.
Waxaana ugu horayntii kahadlay gudoomiyaha golaha sare ee arimaha islaamka ee DDSI sheekh Cabdiraxmaan Xasan Xuseen oo khudbadiisii kusheegay in ay dhamaanba muslimiinta DDSI ay aad uga xunyihiin dilka foosha xun ee loo gaystay walaalahooda kusugnaa wadankaas Libya. Sheekhu waxaa uu sheegay in ay diinta islaamku sal iyo raad toona kulahayn kooxahan argagixisada ee magaca iyo shaadhka islaamka kugabanaya falkooduna yahay gumaadka binu'aadamka loo gaysanayo oo kaliya. Sheekha ayaa sidoo kale sheegay inay diinta islaamku tahay mid naxariis, wanaag, bad baado islamarkaana caan ku ah sama falka.
Waxaa kaloo kahaday madaxa shareecada islaamka ee DDSI sheekh Nadiir Sayid Nuur oo ku dheeraaday sida ay diinta islaamku uga fogtahay falalka noocaas ah isagoo sheekhu soo daliishanayay axaadiis horey u sii tilmaantay inay soo baxayaan niman sidan oo kale ah oo quraanka akhriyaya islamarkaana diinta ka baxsan. Wuxuuna sheekhu sheegay in Nabiga NNKH uu yidhi ha ladilo kuwa sidaas oo kale ah.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo culumada uga danbeeyay ayaa khudbad dareen ku dheehanyahay kasoo jeediyay taasoo ugu horayntii uga tacsiyeeyay dhamaan Itoobiya walaalaheenii sida xaqdarada ah ee fool xumada ah ay kooxda argagixisada ISIS ugu dileen wadankaas Libya ee ay kusugnaayeen. Madaxwaynaha ayaa khudbadiisii ku sheegay in guud ahaanba falalka noocaas ah ee argagixisada ay DDSI si wayn ugasoo horjeedo islamarkaana loola halgamayo sidii hore mid kadaran.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in xasuuqaas loo gaystay muwaadiniinta Itoobiya aysan waxba ka qaadaynin isbadalka iyo horumarka Itoobiya iyo halgankii uu dalku ugu jiray ladagaalanka iyo baabi' inta argagixisada. Madaxwayne Cabdi ayaa sidoo kale aad u canbaareeyay arinta kadhacday Koonfur Afrika ee sida xawayaanimada ah loogu gumaaday dadyowga Afrikaanka ah ee aan u dhalan dalkaasi.
Guud ahaan waxaa munaasibadaas baroor diiqda ah ee saaka Jigjiga kadhacday aad loogu canbaareeyay falka aadka u foosha xun ee ay kooxaha argagixisada ah ee ISIS ku xasuuqeen ilaa 30 qof oo muwaadiniinta Itoobiya ah kuwaas oo kusugnaa dalka Libya.
Munaasibadaas kadib ayaa waxaa wadooyinka waawayn ee magaalada Jigiga isugu soo baxay kumaanan dad oo kudhawaaqayay erayo iyo hal-ku dhagyo aad u canbaaraynayay falalka foosha xun ee argagixisada iyo sida looga soo horjeedo gaar ahaan iyagoo muujinayay boodhadh ay kusawirnaayeen muwaadiniintii lagu dilay dalkaas Libya.
Guud aahanba waxaa saaka ay Jigjiga ku waabariisatay dareen iyo ficil ay kaga soo horjeedaan argagixii loo gaysatay walaalahooda sida xaq darada ah ay ugu xasuuqeen argagixisada ISIS wadankaas Libaya.